Amakha abesilisa athandwa amantombazane kakhulu | Amadoda aSitayela
La Iphunga esilikhiphayo futhi kuyindlela yokuyenga umuntu, ngokuhamba kwesikhathi nayo eba luphawu olucacisa ukuthi singobani, sobuntu bethu. Ngalesi sizathu, kubalulekile ukukhetha amakha ethu kahle, ukuzama ukuthola okuvumelana kahle kakhulu nalokho esikuthandayo kanye nendlela yethu yokuphila.
Ngalesi sizathu, lapho ukhetha amakha, Kumele futhi sinakekele imizwa esifuna ukuyidlulisa, sikhetha amakha anezingoma ezifudumele noma ezintsha, isibonelo. Ngezansi, ungathola izibonelo zamakha athinta inkanuko kakhulu atholakala emakethe namuhla.
1 Lowo Wamadoda
6 Amanzi amakhulu
Este Amakha kaDolce & Gabbana se ebonakala ngobuhle bayo, ngakho-ke ukusetshenziswa kwayo kunconywa kakhulu ebusuku noma emicimbini ekhethekile. Ngomlingiswa wasempumalanga, ukwakheka kwayo okunamandla okwenziwe ikakhulukazi ngamanothi we-basil, coriander kanye novuthi, kuzonikeza noma yimuphi umuntu umlingiswa wesimanje futhi oyinkimbinkimbi, ngaphandle kokulahlekelwa umoya wakudala omchazayo.
Leli phunga, elibonakala ngokuba enziwe ngamaphunga ahlukile, kunconywa ikakhulukazi kulabo bantu abathole ibhalansi yangaphakathi. Amakha kaDior's Fahrenheit ahlanganisa ubucayi namandla ngasikhathi sinye. Ukwakheka kwalo, ngalo mqondo, kwenziwa ngamanothi e-bergamot nawolamula ahlukile ezimbali ezithambile ze-hawthorn ne-lavender. Ilungele noma yimuphi umcimbi, lamakha abuye abe namanothi wezinyosi nezimbali ze-violet ezenza kube ngamakha afudumele.
La mafutha kaPaco Rabanne ikakhulukazi enokhuni kanye nezithelo, ngenxa yokwakheka kwayo ngamanothi e-mandarin ne-mint, agcwaliswe ngesinamoni, i-rose, i-amber nesikhumba. 1 Million, ngalo mqondo, uyiphunga elenzelwe umuntu ozethembayo ofuna ukuzitika ngephunga elehlukile ebusuku noma ngezikhathi ezikhethekile.
ILe Male iyiphunga elihlukile kokunye ngobuhle bayo nokukhethekile. Ngobuntu obuqinile, lamafutha avela endlini uJean Paul Gaultier azokukwenza ube yindoda ehlukile kunoma yisiphi isimo, emicimbini ekhethekile naphakathi nosuku nosuku.Ihlanganiswe ikakhulukazi ngamanothi ka-mugwort, i-bergamot, i-cardamom, i-lavender neminti, iLe Owesilisa ubelokhu ekhona yakhelwe indoda ehlukile ngubani owaziyo ukuthi ufunani.
Amakha kaCreed Aventus aklanywe ngomuntu wesilisa ocabanga ngomuntu ovusa inkanuko nonethemba. Ukwakheka kwayo okuyinkimbinkimbi kunamanothi aphezulu we-bergamot, i-currant emnyama, i-apula kanye uphayinaphu, okwenza iphunga lihlala isikhathi eside. Kukhuthazwe impilo kaNapoleon Bonaparte, u-Aventus ufuna ukugubha impilo, impumelelo kanye nesibindi.
Ngaphakathi kokuhlukaniswa kwe- amakha amadoda futhi kugqamisa iphunga le-Acqua di Giò elenziwe ngu-Armani, elenzelwe ukuthuthukisa inkululeko yakho futhi usebenzise ubuntu bakho ngokugcwele. Ngale ndlela, ukwakheka kwayo okusha kudlulisa inkululeko namandla, okwenza kube kuhle ezinyangeni zasentwasahlobo nasehlobo. Ihlanganiswe namanothi aphezulu wephunga le-orange ne-tangerine, i-bergamot, i-jasmine, i-lime, ilamula, i-orange ne-neroli, i-Acqua di Giò perfume ilungele indoda engakwesabi ukuba yiyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » amakha » Amakha abesilisa athandwa amantombazane kakhulu
Izinzuzo zewayini elibomvu
Ungagqoka kanjani isidlo